Ukuhlukaniswa komuntu njengezinhlobo eziphilayo ngezocansi kumadoda nabesifazane kucacile futhi kuyaqondakala kuwo wonke umuntu kusukela enkathini yasenkulisa. Izinkinga ekuqondeni zibangela uphawu lwesini. Lo mqondo ungacatshangelwa ngezici ezihlukahlukene: ezenhlalo, ezempilo nezombusazwe.
Ngaphambi kokuba siqale ukuhlaziya izimpawu zalesi simo, kubalulekile ukusetha incazelo yayo. Ubulili buyingxenye yezilingo zomphakathi zokuziphatha okubonakala kubonakala kufanelekile, okufanele amadoda nabesifazane. Okusho ukuthi libhekisela emisebenzini ethile, ama-stereotypes anikezwe emphakathini ngokungafani kobulili futhi ahlotshaniswa nokuhlukana kwezinto eziphilayo nokuphila kwabantu. Isibonelo, izici zobungqingili ezibhekiswe emadodeni ziyi-rationality, ikhono, umsebenzi, ukuzimela. Ngesikhathi esifanayo, abesifazane babhekene nokuxhumana, ukuthembela, ukuzwelana, ukuvumelana.
Ubulili obukhethekile emithi
Ukukhetha ukwelashwa, udokotela awunakekeli ubulili besiguli. Ngakho-ke, cishe yonke impilo yowesifazane, ngenxa yokungabikho kwekhanda ekusebenzeni okuvamile komathumbu, kuncike emlandweni wakhe we-hormone. Cishe noma iyiphi i-malaise yesiguli inquma isidingo sokuvakashela kwakhe umjozi wezifo zokwelapha. Emadodeni, izinto zihlukile. Njengomthetho, abameleli bobulili obuqinile banemvelaphi ehleliwe ye-hormonal, futhi uma isiguli esinjalo singazizwa kahle, khona-ke kukhona isifo sezitho zangaphakathi.
Ubulili ezindabeni zezombangazwe nezenhlalakahle
Singasho ukuthi le nqubo igcwele yonke imikhakha yempilo yomphakathi. Ngakho-ke, ekuphileni komsebenzi womphakathi isihluthulelo yisisindo sobulili. Lokhu kubonakala, okokuqala, ukuthi abantu abaningi bacabanga ukuthi abesifazane abatholakali ngokwengqondo, abakwa-savvy abancane, abasebenza kancane kunamadoda. Ngakho-ke, abanye abaqashi balinganisela ukuthi umsebenzi wesifazane uphansi kakhulu kunomsebenzi wesilisa, obonakala ngenani lemali . Kodwa lezi zici ezingathandeki zobulili obuhle akuyona into engaphezu kwezingqikithi. Lezi zici aziqinisekiswanga nanoma yikuphi ucwaningo lwesayensi. Kumele kuqashelwe ukuthi ezimweni ezinjalo kukhona ukubandlululwa. Isibonakaliso sobulili yisici esingathinta inqubomgomo yanoma yimuphi umbuso. Kwamanye amazwe, abesifazane abanikezwa amalungelo agcwele ezombangazwe. Futhi abakwazi ukuhlala ezikhundleni eziphakeme kakhulu zombuso, abavunyelwe ezombusazwe. Ngokuvamile kuvamile ukuthi lesi sikhundla sabesifazane emphakathini sifakwe ngamasiko. Noma kunjalo, amazwe athuthukile alandela indlela yokulingana futhi akhe isimo lapho ubulili bungathintwa khona. Lokhu kubonakala, ngokwesibonelo, ekutholeni umthetho owenqabela konke ukubandlulula ngenxa yobulili, okungukuthi, abesifazane banikezwa amalungelo alinganayo namadoda ekwenzeni izinqumo, emakethe yezabasebenzi nasemkhakheni wokusabalalisa imithwalo yemindeni. Umphakathi owakhiwe ngokulingana ngokobulili yiwo kuphela umphakathi wesintu nesimanje.
Ungasusa kanjani ukucindezeleka?
Psychology kanye pedagogy
Ihhotela Sunset Beach Resort Indawo abantu (Pattaya, Thailand) izithombe, incazelo, izivakashi Izibuyekezo